नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यस पटकको तीज बिशेष तिज ! जहाँ प्रतियोगितात्मक तिज न्रित्य देखी अप्रतियोगी सम्म सबैलाई नाच्न, गाउँन र रमाइलो गर्न हामी सबै आयोजक हरु तपाईंहरुलाई सार्वजनिक रुपमा चुल्हे निम्तो दिँदै छौं ।
यस पटकको तीज बिशेष तिज ! जहाँ प्रतियोगितात्मक तिज न्रित्य देखी अप्रतियोगी सम्म सबैलाई नाच्न, गाउँन र रमाइलो गर्न हामी सबै आयोजक हरु तपाईंहरुलाई सार्वजनिक रुपमा चुल्हे निम्तो दिँदै छौं ।
यस पटकको तीज बिशेष तिज ! जहाँ प्रतियोगितात्मक तिज न्रित्य देखी अप्रतियोगी सम्म सबैलाई नाच्न, गाउँन र रमाइलो गर्न हामी सबै आयोजक हरु तपाईंहरुलाई सार्वजनिक रुपमा चुल्हे निम्तो दिँदै छौं । लेबर डे को छुट्टी पनि पारेर आयोजित यस पटकको तिजलाई अबिस्मरणिय बनाउन तपाईंको उपस्थिती र सहभागिता जरुरी छ । अमेरिकामा भएपनी मन त नेपाली न हो होइन र ? त्यसैले आउनुस् यस पटक पनि तीजमा सगै गाउँ, सँगै नाचौ । ( For more information please click this link http://www.nepalmother.com/2013/08/blog-post_6670.html) कुनै जिज्ञासा भए भिडियो हेर्नुस र हामी आयोजकहरुलाइ फोन गर्न सक्नुहुन्छ । भिडियोमा नाम र नम्बर हरु सबै समेटिएका छन । when : Monday, September 2, 2013, - 2pm to 8 pm, where : खुल्ला चौर , Mason District Park, 6621 Columbia pike, Annandale Virginia 22003 , - आयोजकहरु : * अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच, * अमेरिका नेपाल टेलिभिजन, * डिसी नेपाली समाज, * अमेरिकन नेपाली नर्सिङ समाज, * अमेरिका नेपाल चौपारी, * अनेसास डिसी म्याट्रो च्याप्टर , बाँकी विवरण भिडियोमा .... https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GcrR1x0vtxM#t=25